Saturday February 20, 2016 - 02:30:17 in Wararka by Web Admin
Munaasabadaasi oo ahayd qado sharaf aad loo soo agaasimay ayaa ujeedadeedu waxay ahayd sidii loogu soo bandhigi lahaa Musharaxa beesha Celli ee xilka Xildhibaanda Qaranka ee la filayo in la soo xulo bisha Agoosto ee sanadkan, xilligaasi oo ku ek waqtiga Dawladda haatan shaqeynaysa.
Musharaxa Xildhibaanka beeshaasi Md, Cabdi-raxmaan Xasan Axmed Xaaji Xuseen (Farxaan)ayaa khudbad uu halkaasi ka soo jeediyay wuxuu uga waarbixiyay taariiqda iyo marxaladda uu iminka marayo Wadanka Soomaaliya, wuxuu sheegay beeshiisu in looga baahan yahay in ay wax la qeybsato beelaha kale, isagoo hoosta ka xariiqay inay ka go'an tahay sidii ay u heli lahaayeen xaq kasta oo ay ku leeyihiin Dawladda Federaalka.
Md, C/raxmaan Farxaan oo hadalkiisa si wata ayaa balan qaaday inuu Cadaalad, Sinaan iyo Horumarinta bulshada uu ka shaqeyn doono, wuxuuna ka codsaday madax dhaqameedyada beeshaasi inay la baadi goobaan sidii uu kursiga Baarlamaanka ee beeshaasi ugu guulaysan lahaa. Hogaamiye dhaqameedka guud ee beesha Celli Cumar Nabadoon Cumar Ibraahim Cosoboow oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan musharxnimada C/raxmaan Farxaan, wuxuuna cadeeyay inay u hawl gali doonaan sidii mudanahaasi ugu soo bixi lahaa Xildhibaanada soo socda haddii uu Alle idmo.
Munaasabadaasi waxaa iyana ka hadlay Duubabka lixda (6) Celli Cumar, Siyaasiyiinta, Aqoonyahanda, Ganacsatada, Haweenka iyo Dhallinyarada beeshaasi waxayna ku cel-celiyeen inay taageersan yihiin musharaxa la soo bandhigay, intii ay socotay xafladaasi waxaa halkaasi laga aqriyay dhambaalo taageero ah oo ka yimid jaalliyadaha beshaasi ee ku kala dhaqan qaar ka mid ah wadamada Caalamka.
Taariiq ahaan musharaxa cusub ayaa wuxuu ku dhashay sanadkki 1989-kii Magaalada Muqdisho, waxbarashadiisii hoose, dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay G/Banaadir, shahaadada tacliinta sare ee cilmiga Maareynta iyo Maamulka wuxuu ka qaatay machadka Maalik Bin C/lla ee Soqortooyada Sacuudiga, 2010-kii wuxuu noqday Gudoomiyaha ururka horumarinta iyo midnimda dhallinyarada Soomaaliyed ee Dalka Sacuudiga, 2011-kii wuxuu ku guuleystay gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee Magaalada Jedda ee Sacuudiga, 2013-kii wuxuu ku soo laabtay Dalkiisa Hooyo, isla sanadkaasi wuxuu la soo shaqeeyay Maamulkii G/Bnaadir uu Gudoomiyaha ka ahaa Tarsan, 2014-2015-kii wuxuu noqday Xoghayaha Degmada Yaaqshiid ee G/Banaadir, luqad ahaan wuxu ku hadlaa afaf kala duwan, hadafkiisu waa sidii ay Soomaaliya cagaheeda isugi taagi lahayd, mustaqbalkana wuxuux jecel yahay inuu noqdo Xildhibaan Soomaaliyeed.
Musharaxaan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee isu soo taaga Xildhibaanda la soo xuli doono bisha Agoosto ee sanadkan aynu ku jirno marka uu idlaado waqtiga Dawladda iminka jirta.